LG Optimus G Pro ကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ LG Gx ကို မိတ်ဆက်ရောင်းချ ~ The ICT.com.mm Blog
LG Optimus G Pro ကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ LG Gx ကို မိတ်ဆက်ရောင်းချ
LG က သူ့ရဲ့ LG G2 Smartphone ကို စတင်မိတ်ဆက်တုန်းက သူရဲ့ Brand Name ဖြစ်တဲ့ Optimus ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ထည့်သွင်းမှု မပြုခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီကစလို့ LG ရဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Smartphone တွေဖြစ်တဲ့ Vu Smartphone တွေမှာလည်း Optimus ဆိုတဲ့ Brand Name မပါခဲ့ပါဘူး ။ LG G Flex ကို မိတ်ဆက်ရောင်းချတုန်းကလည်း မပါ၀င်ခဲ့ပါဘူး ။ ယခုဆိုရင် LG ဟာ သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားထုထည်ကြီးမားတဲ့ Smartphone တွေကို Brand Name အသစ်နဲ့ ပြောင်းလဲရောင်းချနေပါပြီ ။
ဒါကြောင့် LG ဟာ Optimus G Pro ရဲ့ အစားထိုးဖြစ်တဲ့ LG Gx ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ် ။LG G Pro ကတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်း World Mobile Congress အပြီးမှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
LG Gx ဟာ IPS Screen ကို အသုံးပြုထားပြီး ၊ မျက်နှာပြင်အကျယ်ကတော့ ၅.၅ လက်မရှိပြီး Resolution ကတော့ 1080P ဖြစ်ပါတယ် ။ LG ရဲ့ Optimus G Pro လိုပဲ LG Gx ဟာ သုံးစွဲသူတွေ လွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သူ့ရဲ့ ဖုန်းလက်ကိုင်ပတ်ပတ်လည်ရဲ့ အထူ ကို ပါးနေအောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်း အနေနဲ့ ကတော့ LG Gx နဲ့ Optimus G Pro ဟာ သိပ်ကွားခြားမှုမရှိပါဘူး ။
LG Gx ဟာ quad-core Snapdragon 600 Processor ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ RAM ကတော့ G Pro အတိုင်း 2GB ရှိပါတယ် ။ အနောက်ဘက် Camera ကတော့ 13 Mega Pixel ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက် Camera ကတော့ 2.1 Mega Pixel ဖြစ်ပါတယ် ။ Battery ကတော့ 3140 mAh ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး Built-in Memaory ကတော့ 32GB ဖြစ်ပါတယ် ။ Gx ရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ 150.6 x 76.1 x 9.2 mm ဖြစ်ပါတယ် ။ LG Gx ရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ 167 Grams ဖြစ်ပါတယ် ။ ရရှိနိုင်တဲ့ Color တွေကတော့ အနက် နဲ့ အဖြူရောင် နှစ်မျိုး ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ LG Gx ဟာ Android Jeally Beam ကိုအသုံးပြုလည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ LG Gx နဲ့ LG Optimus G Pro တို့ အဓိက ကွာခြားတာကတော့ LG Gx မှာ 4G LTE ချိတ်ဆက်မှု ကို ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ LG Gx ဟာ ယခုအချိန်မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံ တစ်ခုထဲမှာပဲ ရရှိနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ် ။ နိုင်ငံတစ်ကာကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှ ဖြန့်ချီရောင်းချမယ်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး ။
Newer Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး Eight-Core Processor သုံး Honor 3X
Older အလုပ်မရှိတာလား? အလုပ်မလုပ်ချင်တာလား? အလုပ်လုပ်ခွင့်မရတာလား?